Ukupakishwa Kwe-Magnesium Imisebenzi yeArhente yeArome kwisazisi somzobo kunye nelayini yobugcisa yokuhanjiswa kweKailani isekwe kuncinci kwaye icocekile. Le minimalism ihambelana nemveliso enesithako esinye, i-magnesium. Uhlobo lokuchwetheza olukhethiweyo luqinile kwaye luhlobo lokuchwetheza. Iimpawu zombini amandla e-mineral magnesium kunye namandla emveliso, ebuyisela amandla kunye namandla kubathengi.
Ibhotile Ye Wayini
Ibhotile Ye Wayini Isinongo senza isazisi semifanekiso yomqokeleli uGabriel Meffre obhiyozela iminyaka engama-80. Sisebenzile kuyilo lweempawu zeminyaka engama-30 yexesha, efanekiselwa kakuhle ngumfazi eglasi ye wayini. Iipleyiti zombala osetyenzisiweyo zivakaliswa ngokufakelwa kunye nokutshiza i-foil eshushu ukushukumisa icala lomqokeleli.
Ukufakelwa Kokutya Umceli mngeni wokufezekiswa kokupakishwa kwe-chip ye-BCBG ibandakanya ukwenza uthotho lokupakisha ngokufanelekileyo kunye nendalo yophawu. Ukupakishwa kwakufuneka kokubini kwaye kube okwangoku, ngeli thuba lokuchukumisa kobuhlakani kunye necala elimnandi nelinobubele elizisa abalinganiswa abazobe kunye nepeni. I-aperitif lixesha lokuqiniseka ekufuneka lisiva kwiphakheji.
Isitepsi Izitebhisi ze-U zamanyathelo ngokudibanisa iiplati zebhokisi ye-mraba yecloud yeemilo ezinobubanzi obahlukeneyo. Ngale ndlela, izitebhisi ziye zizixhase ngokwazo ukuba ubukhulu abudluli kumbundu. Ukulungiselela kwangaphambili ezi ziqwenga kubonelela kwindibano. Ukupakisha kunye nokuhambisa ezi ziqwenga ngokuthe ngqo nazo zenziwe lula.
Isitepsi I-UVine spiral staircase yenziwa ngokudibanisa iiprofayili zebhokisi yeU kunye no-V ngendlela yokutshintsha. Ngale ndlela, izitebhisi ziyazixhasa kuba azidingi sibali senkxaso okanye umjikelezo wecala. Ngobume bayo bokumodareyitha kunye nokusebenza ngokudibeneyo, uyilo luzisa ulwandiso kuyo yonke imveliso, ukupakisha, ukuthutha kunye nofakelo.
Gamsei I-Cocktail Bar Tuesday 5 July
Aix Arome Cafe Ikhefi Monday 4 July
Wuhan Pixel Box Cinema I-Cinema Sunday 3 July
Ukupakishwa Kwe-Magnesium Ibhotile Ye Wayini Ukufakelwa Kokutya Isitepsi Isitepsi Igumbi Lokutshixa